🥇 ▷ 5-ta barnaamijyadood ee wax soosaarka bilaashka ah ee loogu talagalay ipadka ipadka leh ee loo yaqaan 'ipad' ✅
5-ta barnaamijyadood ee wax soosaarka bilaashka ah ee loogu talagalay ipadka ipadka leh ee loo yaqaan ‘ipad’
Maalmahan casriga ah, waxsoosaarku wuxuu noqday mid aan dhamaanteen ku mashquulno mana jiro wax diidi kara in ay guuleysatay dhulkasta oo adduunka ah. Qof kastaa wuxuu ku dadaalayaa inuu sameeyo wax kasta oo wax soo saar leh ha noqoto xirfaddiisa ama shaqadiisa. Ma garanayno sida looga gudbi karo dhammaan qatarta waajibaadka maalinlaha ah iyo inaan u xalinno dhammaan howlaha muhiimka ah. Laakiin, waxay umuuqataa sida barnaamijyada wax soo saarka ee xariifka ah ee iPadkaaga inay abaabuli karaan wax walba sida saxda ah ee aad u rabto.
Waxsoosaarka ayaa dhamaantiis kudhamaanaya inuu sifiican sameeyo wax badana kuqoto waqti yari iyadoo la ilaalinayo shaqada / nolosha isku mar. Waxaan kaloo dhihi karnaa waxsoosaarka weyn waa natiijada ka soo baxda maaraynta waqtiga weyn, maanka lagu hayo howlaha mudnaanta leh, si wanaagsan loo abaabulay in la sameeyo liisaska iyo arrimo badan oo naga caawinaya sidii aan u gaari lahayn wax soo saar la doonayo.
Laakiin si run ah uga hadlida, noqoshada wax soo saar dhinac kasta ma ahan koob shaah ah iyo xitaa is-edbinta iyo dhiirrigelinta marwalba kuma filna. Marka, haddii aad waxoogaa yar ku wareersan tahay sida aad noloshaada wax soo saar ugu soo qaadan karto, aan kaa caawinno arrintaan murugsan oo aan helno qaab cusub oo noloshaada wax u soo saar leh u soo saarto. Hadaad leedahay iPad la adeegsaday ama iPhone ama wali isticmaalkiisa markaa waa inaad xaqiiqdi ka hubisaa ka hooseeya barnaamijyada wax soo saarka ee 5-ta ah ee bilaashka ah ee iPad-ka kaas oo runtii ku siin doona xalalka nolosha welwelka leh ee walwalka leh.
Apple waxay sameysay barnaamij wax soo saar weyn – iWork for iPhone & iPad, oo ah qeybta waxsoosaarka Apple iyo xafiiska mobiilka. Waxay ka kooban tahay Lambarrada loogu talagalay wargeysyada, Bogagga loogu talagalay soo-saarista ereyga iyo Fure guud oo loogu talagalay soojeedinta. Barnaamijkan cajiibka ah wuxuu aad ula mid yahay xafiiska Microsoft wuxuuna ku siiyaa isla astaamo isku mid ah qeybta iPad-ka ee barnaamijyada.
Bogagga qoraalka ereybixinta, si fudud ayaad u qori kartaa wax kasta oo aan ka reebayn xusuus qor ilaa xaashi, warqad yar oo buug ah, warqad ku dhajin kaarka, maqaalka aad dib ugu bilawdid iyo wixii la mid ah. Waxaad si fudud uga soo qaadan kartaa shaxanka naqshadaha ah ama waxaad ka soo dejisan kartaa ilo dhowr ah oo internetka ah oo aad ka soo dejin kartaa. Sidoo kale, waxaad ku dari kartaa sawirro hal abuur leh, farshaxan gacmeed iyo waxyaabo kaloo badan si aad u habayn karto warbixinnadaada xitaa intaa ka sii dheer.
Lambarrada waraaqaha waraaqaha wax lagu qoro waxay ku siinayaan xalka guud-ka-mid ah oo kaa caawinaya inaad si fudud oo dhaqso ah u qorsheysato wax kasta oo ka yimaada qorshaha kaydka illaa jadwalka, liiska hubinta illaa miisaaniyadda, liistada kooxda illaa qorshaha xaflada, qaan-sheegashada ilaa saadaalinta qiimaha iyo in ka badan. Hadaad ubaahantahay soo bandhigid indho-qabad leh, markaa Keynote wuxuu halkan kuyaala iWork si uu ugusoo bandhigo dhaqso & fududaato shaqada, iskuulka, goos goos ah, shirar ama sheeko sheeko ama naqshad fikradeed nooc kasto ah.
Marka la soo koobo, iWork waa mid ka mid ah barnaamijyada wax soo saarka ugu fiican ee iPhone iyo iPad iyo badal weyn oo Microsoft Office ah.
Maxay tahay sababta aan ugu tiirsanayno qalabka qaaliga ah, cilladaysan iyo kuwa culus marka aan si fudud si sahlan ugu baari karno alaabteenna taleefannada casriga ah? Tani waa fikradda wax soo saarka leh ee ka dambaysa barnaamijka cusub ee loo yaqaan ‘Scannable’ ee loo yaqaan ‘Evernote’ oo loogu talagalay macruufka, waana barnaamij caqli badan oo bilaash ah kaas oo keenaya qalab u dhigma oo u dhigma laakiin bixiya faa’iidooyin kala duwan oo kala duwan. Hadda waxaa jira makiinado badan oo culeyskoodu culus yahay iyo sawirada la qaadan karo ee suuqa laga heli karo, laakiin haddii aad isticmaaleyso iPad oo aad wali taageere u tahay aaladda Apple’s markaa uma baahnid inaad lahaatid iskaan-gooyeyaal la qaadan karo. Sababtoo ah waxaad heli kartaa aalado iskaanka ah, waxaad si fudud ugu soo dejisan kartaa barnaamijka ‘Evernote Scannable App’ ee iPhone ama iPad-kaaga.
Haddii ay qasab kugu tahay inaad iska dhigto dukumiintiyada xaaladaha deg-degga waqti ka waqti, markaa waxaad u baahan tahay oo keliya inaad keydiso dukumiintiyadaas oo sidoo kale qaraarka sare ah. Halkan, Evernote’s Scannable App waxay si otomaatig ah u qabataa dukumiintiyo tayo sare leh xawaare dhakhso leh. Waqti ayey kuu badbaadineysaa maadaama ay si otomaatig ah isu beddesho, dalagyada iyo u habeyso dukumintigaaga ama sawirradaada si cad oo fudud oo loo arki karo qaab. Marka, warqad-la’aan, ku billow boggaaga ‘Evernote’s Scannable’ ee ku saabsan ipadkaaga oo u soo saar wax soo saar la’aan dhib la’aan noloshaada.
Tani waa barnaamij qoraal gacmeed gaar ah oo gabi ahaanba bilaash ugu ah iPad iyo iPhone. Waa cadayn, cimri dheeri ah iyo istaroogyo siman ayaa ku siin doona khibradda qorista ugu fiican ee macruufka sida aan waligeed hore loo arag.
Marka, hadda, haddii uu qof dhaho wacdiriig qurux badan ma aha koob shaahaaga, ka dib tus tusitaanka qoraalkaaga curiska ah adoo soo saaraya Adeegsiga Qoraalka Qalabkaaga. Waxaad si fudud ugu diri kartaa fariimahaaga farshaxanka ehelladaada aad jeceshahay iyo sidoo kale qorista dhowr ikhtiyaar midabo leh.
Isticmaal Qalabka Qoraalka Qoraalkaaga ah, shey kasta oo liiska ku jira ayaa si fudud u noqon kara liis-hoosaad u gaar ah, sidaa darteed uma baahnid inaad ka walwasho xaddidaadda booska loogu talagalay qoraalada iyo liisaska aad ku abuurto UYH.
Hada raadinta ereyada adag waa mid dhakhso badan oo fudud oo ah Dictionary.com loogu talagalay iPad. Si lamid ah kii ka horeeyey ee taabashada iPod-ka iyo iPhone, waxay si dhakhso leh u bixisaa in ka badan 90,000 oo macno iyo 1 milyan oo qeexitaan ah. Hadana haddii aad raadineyso ereyga saxda ah ee higgaaddaada, barnaamijkani wuxuu kuu keenayaa liis aad u ballaaran oo ereyo isku mid ah oo higgaad ah oo la mid noqon kara higgaaddaada oo si wanaagsan ugu shaqeyn kara dukumentiyadaada. Oo ay weheliso ereyga saxda ah appkan wuxuu sidoo kale bixiyaa hage ku dhawaaqida sidoo kale. Qalabkeeda ku dhex-dhisan ee loo yaqaan ‘thesaurus’ ee loo yaqaan ‘thesaurus’ wuxuu ka kooban yahay ereyo isku-xirnaan ah, oo kuu fududeynaya inaad u booddo ereyada xiga ee barnaamijkan ‘ipad’.
Qaar ka mid ah astaamaha ugu fiican ee la midka ah tilmaamaha dhawaaqa dhawaaqa, ereyada higgaadinta, iyo ereyga maalinta – waxaad u baahan tahay oo keliya xiriir khadka internetka ah. Laakiin, astaamaha udub-dhexaadka ee barnaamijkan ayaa keenaya isu-dhigmayaal isla markaana eega qeexitaanka shaqooyinka xitaa markaad qadka-ka-baxdo.
La soco malaayiin shakhsiyaad hal abuur leh oo u adeegsaday Photoshop Express gudaha iPad oo aad u aamina inta ugu badan maxaa yeelay sifooyinkeeda deg degga ah, fududaanta iyo awoodda badan. Tijaabi iskudaygan lambarkan koowaad oo ay ka buuxaan wax soo saar waxayna kaa caawineysaa inaad si dhakhso leh u abuurto kolonyo, tafatir isla markaana aad ugu wareejiso rugtaada xoogaa kabashooyin ah.
Photoshop Express ee loogu talagalay ipadka waxay bixisaa tiro ka mid ah aalado gaar ah oo kor loogu qaadayo tayada sawiradaada waxayna ku siinaysaa qalab isugeyn ah oo kaa caawinaya inaad qaabeeyso sawirradaas la xoojiyay. Waxay ku siinaysaa dabacsanaan iyo xakameyn sawirada oo ku kala duwan midabka, cabbirka xuduudaha, zoom iyo, digsiga shaqsiyeed. Waxa kale oo aad u adeegsan kartaa barnaamijkan qabow si aad kor ugu qaaddo sawirradaada iPhone. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho hagaajinta bar-ka-riixista oo u oggolaatid otomaatiga hal-taabashada inuu kuu sameeyo inta harsan adiga.
Fikradaha kama dambeysta ah…
Kaliya waxaad u baahan tahay inaad sameyso dadaal dheeri ah oo dheeri ah xaqiiqdi badana waad gaari doontaa. Waxaan rajeynaynaa in barnaamijyada wax soo saarka ee bilaashka ah ee 5-ta sare ee looyaqaano ‘IP’ ay kaa caawin doonaan inaad si habsami leh uga shaqeyso himilooyinkan. Adigoo adeegsanaya barnaamijyadan waxtarka leh ee loo adeegsado ipadka, waxaad ku gaari doontaa nolol sahlan dhinac kasta, ha noqoto nolosha shaqadeeda ama mid shaqsiyadeed, wax walbana waa loo kala saari doonaa, ugu dambeyntiina waxaad noqon doontaa khabiir wax soo saar adiga iskaa ah.
Waa kuwee barnaamijkee aad ugu jeceshahay iyo sababta? Noo ogeysii faallada hoose.
Rick wuxuu bilaabay shaqadiisa isagoo ah blogger dib u eegis ku sameynaya qalabka teknolojiyada ka dibna wuxuu ku biiray kooxda at whytheluckystiff.net qoraa ahaan. Wuxuu inta badan la shaqeeyaa kooxda shaqada, isagoo helaya dhiirrigelin & nuxurka qodobbadiisa sida ay dib ugu eegaan agabyo farsamo oo kala duwan.
Haddii aad jeceshahay maqaalkan ka soo miescapedigital.com dhaqaajiso ogeysiiska oo ku soo biir kanaalkeena Telegram, na raac Twitter , instagram oo iska qor Youtube ama ku soo biir barnaamijkeena barnaamijka Windows.